लघुवित्तीय क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण लघुवित्तीय क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो
लेख | दृष्टिकोण 51 views
लघुवित्तीय क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो
अहिले केन्द्रीय बैङ्कका केही उच्चतम तर जिम्मेवार अधिकारीहरूले लघुवित्त बैङ्कहरूलाई वाणिज्य बैङ्कजस्ता भए र तिनले आफ्नो अभीष्ट भुले भनेर एक ढङ्गले तीतो पोखिरहेको देखिन्छ । केही हदमा यो ठीकै पनि होला । तर, इजाजत दिनुपूर्व पनि वर्षौं लगाएर इजाजतको प्रक्रियागत अलमलले घोत्लिनेर ढिलो गरेर इजाजत दिने, दिएपछि पनि हरेक वर्षजस्तो सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने निकायबाटै यस खाले विषयहरू आउनुलाई खासै राम्रो मानिन्न । खास गरेर केन्द्रीय बैङ्कले एकातर्फ वित्तीय पहुँच नपुगेको भन्दै इजाजत पनि दिने र अर्कोतर्फ ती आप्mना बाटो भुलेर वाणिज्य बैङ्किङ नै गर्न लागे भन्नु पक्कै पनि विरोधाभासको स्थिति हो । यसबाट इजाजतचाहिँ दिने तर तिनले के काम गरिरहेका छन् भन्ने कुराको मेसोचाहिँ नपाउने स्थिति हो भन्ने बुझिन्छ ।
लघुवित्त बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाहको विस्तारचाहिँ वैवाहिक सिजनमा बढी हुने विषय रहस्योद्घाटन पनि हुन थालेको छ । यो तथ्य, भलै यो अनुमान मात्र हो अहिलेलाई, ले के देखाउँछ भने लघुवित्त बैङ्कहरूको लगानी उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन । सम्भवतः यही कारण यस क्षेत्रमा खेताला ग्राहक र बहुबैङ्किङको उपस्थिति बाक्लै गरिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । खेताला ग्राहक भनेको लक्षित ग्राहक नभएर कसैको नाममा कर्जा लिने गरी नक्कली ग्राहक बनिदिनु हो । यसो गरेबापत उसले केही रकम ज्याला पाउँछ र उसले लिने कर्जाचाहिँ उसलाई खेताला बनाएर पठाउने मालिकले उपयोग गर्छ । अब यहाँनेर मालिकले कर्जा नियमित तिरिरहन सक्यो भने त्यसमा कसैको आँखा नपर्ला, केन्द्रीय बैङ्कको समेत । कथंकदाचित् त्यस्तो कर्जा नियमित हुन सकेन भने वा मालिकले धोका दियो भने खेतालाले आत्महत्याको शिकार हुनुपर्ने स्थिति पनि आउँछ । वास्तवमा यस्तो घटना ( भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा ) यो क्षेत्रमा भएकै हो । अब नेपाली लघुवित्त क्षेत्रमा भयो वा भएको छैन भन्ने कुरा हल्लामा सुन्न आएकोबाहेक तथ्यमा आधारित भनेर अहिलेसम्म कसैले भनेका छैनन् । तर, माथि केन्द्रीय बैङ्कका आधिकारीहरूबाट बेलाबेला आउने चासोबाट अनुमान गर्न के सकिन्छ भने नेपाल पनि यस्तो स्थितिबाट अलग छैन । तर, यो कुरा विशेष अध्ययन र केन्द्रीय बैङ्कको सुपरिवेक्षणबाट मात्रै भन्न सकिने कुरा हो । यसतर्फ सुपरिवेक्षण भएको देखिए पनि त्यसखाले विषय आम जानकारीमा आएको भने देखिँदैन । यसर्थ, यो क्षेत्रको अध्ययनविना यस्ता विषयमा यकिन स्थिति के हो ? भनेर यसै भन्न सकिँदैन ।
वास्तवमा लघुवित्त क्षेत्रमा गतिलो तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित अध्ययन भएकै छैन । हालसम्मको प्रवेश (पेनिट्रेशन) बाट यो क्षेत्रमा विपन्न वर्ग वा लक्षित वर्गको आर्थिक स्तरीकरण कति भयो ? महिला सशक्तीकरण भएको छ भनिन्छ, तर तिनलाई मापन गर्ने गरी कति उपलब्धि भयो ? भन्ने विषय सम्बन्धित क्षेत्रबाट बाहिर आउनुपर्ने हो । यो सम्बन्धित क्षेत्र भनेको यो कार्य या त केन्द्रीय बैङ्क याने कि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट हुनुपर्थ्यो वा नेपाल सरकारबाट । सरकारबाट यसको अपेक्षा नगरिएको होइन तथापि हालसम्म पनि हुनसकेको छैन । सरकार आफ्नै ध्याउन्नमा लाग्ने भएकाले यो कार्य केन्द्रीय बैङ्कबाटै हुनु राम्रो हो । हो, यस्तो कार्य निजीक्षेत्रका अध्ययन संस्थानहरूबाट पनि गर्न नसकिने होइन, तथापि यसमा ठूलै लागत आवश्यक पर्ने भएकाले निजीक्षेत्रबाट ठूलो खर्च गरिहाल्ने अवस्था नआउने भएकाले यसमा केन्द्रीय बैङ्क नै अघि सर्नुपर्छ ।
नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको विकास हुन थालेको अढाई दशक ( २०४९—२०७४ ) पूरा भएको छ । यस अवधिमा २५ लाख सेवाग्राहीलाई कमसे कम पनि एकपटकको लघुवित्तीय सेवा पुगेको तथ्याङ्क देखिन्छ । केन्द्रीय बैङ्कबाट स्वीकृति लिएर लघुवित्तीय सेवा प्रदान गर्ने घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरू, जसलाई छोटकरीमा लघुवित्त बैङ्क भनिन्छ, नै ५५ ओटा छन् । अझै सयभन्दा बढी पाइपलाइनमा केन्द्रीय बैङ्कको इजाजतको प्रतीक्षामा रहेका छन्, भनिन्छ । ती सबैले स्थापना हुने अवसर पाएको खण्डमा नेपालमा लघुवित्तीय बैङ्कहरूको सङ्ख्या निकै धेरै हुने स्पष्ट छ । २०७४ असोजसम्म ५४ ओटा लघुवित्त बैङ्कको आँकडा हेर्दा सबै ७७ ओटा जिल्लामा लघुवित्त बैङ्कको भौतिक उपस्थिति रहेको देखिन्छ । तिनले २५ लाख १४ हजार १ सय ८० जनालाई लघुबचतमा आबद्ध गरेका छन् । कुल २४ लाख ३२ हजार २ सय ५८ जना समूह सदस्यमध्ये १६ लाख ३३ हजार ८ सय २० जनाले लघुकर्जा प्राप्त गरेको देखिन्छ । लघुबचतसित आबद्ध सङ्ख्या २५ लाख नाघेको हिसाबबाट हेर्दा नेपालमा अब विपन्न वर्ग रहेका सबैमा यो सेवा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, लघुकर्जा भने १६ लाखमा पुगेको हुँँदा दुवैखाले सेवा भने २५ लाखमा पुगिसकेको छैन । तर, गैरसरकारी संस्थाहरू, फिङ्गोज, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको समेत आँकडा समावेश गर्ने हो भने यसका सेवाग्राहीको सङ्ख्या २५ लाख नाघेको पक्कै छ । तर, त्यो सबै तथ्याङ्क हाल उपलब्ध गराउने व्यवस्था वा चाँजोपाँजो नभएकाले यसलाई अनुमान गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । मोटामोटी रूपमा लघुवित्त बैङ्कहरूले मात्र पनि २५ लाखमा सेवाग्राहीलाई बचतसित आबद्ध गरेको देखिएकाले यसलाई एउटा आधार तथ्याङ्क मान्दा नेपालमा अब विपन्न वर्गमा एकपटकको लघुवित्तीय सेवा पुगिसकेको छ । तर, यस्तो सेवाको स्तर केकस्तो छ भन्ने विषय विशेष अध्ययनविना भन्न नसकिने भएकाले अब यतापट्टि सम्बन्धित क्षेत्रको ध्यान जानुपर्छ । अहिले जसरी यो क्षेत्रमा ‘लोन डुप्लीकेशन र मल्टिपल फाइनान्सिङ’को विषय सतहमा आइरहेको छ, (भरखरै मात्र अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूका मुखबाटै बिहे गर्ने मौसममा यो खाले कर्जा अत्यधिक रूपले विस्तार हुन थालेको छ भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ) त्यो हेर्दा के लाग्छ भने यो क्षेत्रको अध्ययन र मूल्याङ्कन ढिला भइसकेको छ । अब यतापट्टि लाग्ने हो कि ? कमसे कम त्यसो भयो भने नेपाली लघुवित्त क्षेत्रको उपलब्धिमाथि तथ्यसहित लघुवित्तको विश्वबजारमा प्रस्तुत हुने अवसर पनि मिल्थ्यो भने हालको जस्तो अधिकारीहरूबाट हचुवाका भरमा बोल्नुपर्ने स्थितिमा पनि सुधार आउँथ्यो ।